पुरुषको कानैबाट थाहा पाउनुहोस् कस्ता व्यक्ति धनि र कस्ता कंगाल, तपाईको कस्तो ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/पुरुषको कानैबाट थाहा पाउनुहोस् कस्ता व्यक्ति धनि र कस्ता कंगाल, तपाईको कस्तो ?
काठमाडौँ । आजसम्म त कानको काम सुन्ने मात्र हो भन्ने सोच्नुभएको छ होला । तर समुन्द्रसास्त्रको मान्यता अनुसार कानका आधारमा मानिसको भाग्य निर्धारीत हुने बताइएको छ । यसैगरी कानकै आधारमा मानिसको ब्यक्तित्व पनि निर्धारण हुने बताईएको छ । यसैकारण तपाईपनि आफ्नो कान ऐनामा हेरेर आफ्नो अवस्था पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
समुन्द्रशास्त्रको मान्यताअनुसार यदि तपाईको कान छोटो छ भने निकै बुद्धीमानि हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । जुन मानिसहरु जन्मंदा नै कान लामो भएर जन्मेको छ त्यस्तो मानिसको आयु लामो हुने समुन्द्रशास्त्रमा उल्लेख गरेको पाईन्छ ।
यसरी लामो कान हुने मानिसहरु जिवनमा निकै संघर्ष गर्नुपर्ने र कान चेप्टा भएका मानिस निकै भोगबिलास गर्ने प्रकृतीका हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी कानमा लामा रौँ मानिसहरु पनि हेर्दा सजिलै अरुको मनमा बस्न नसकेपनी उनिहरु दिर्घआयु हुने कुरा को दाबि समुन्द्रशास्त्र ले गरेको छ । यसरी कानमा रौँ आउने मानिस आफ्नै कर्मको आधारमा धनसम्पती आर्जन गर्ने पनि समुन्द्रशास्त्रले उल्लेख गरेको छ ।त्यसैगरी निकै सानो कान हुने मानिसहरु मितव्ययि हुने र धन बचाउने तथा थोरै छुच्चा स्वभावका हुने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ ।
तर कालो कान भएका मानिसहरु तथा सुख्खा देखिने कान भएका मानिसहरु लाई शास्त्रले निकै नराम्रो संकेत गरेको छ । यस्ता प्रकारका मानिसहरु ले आफ्नो जिवनकालमा अधिकांश समय आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने तथा केही दुख कष्ट भोग्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
५ मिनेटमै अनावश्यक रौँ हटाउन यसरी प्रयोग गर्नुहोस् कोलगेट, पूरा हेर्नुहोस
२० वर्ष पार गरेपछि महिलामा आउँछ यस्ता ५ परिवर्तन